Hjem > Uncategorized @so > Wadooyinka cudurka iyo sidii aad iskaga difaaci lahayd
Wadooyinka cudurka iyo sidii aad iskaga difaaci lahayd
HIV-ka waxaa badanaa lagu kala qaadaa galmada aan la iska ilaalin ee lala yeesho qof qaba HIV oo aan baxnaanin daawo ku jirin, dhiig shubis/bixin iyo hooyada ilaa ilmaha wakhtiga uurka, dhalashada iyo naas nuujinta.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad isaga difaaci karto HIV-ka:
Daaweyn guul leh. Khatar uguma sugnid in aad ka qaado cudurka HIVka qof qaba HIV-ka oo ku guuleystay baxnaaninta daawo. Taas macnaheedu waxa weeye in qofku raacayo daaweynta, qaadanayo daawada sidaas awgeedna heerka fayrasku uu aad u hooseeyo oo aan la isugu gudbin karin, ha ahaado galmo aan la ilaalin, uur ama dhalmo.
Kondhomku wuxuu ka hortagaa HIVka iyo caabuqyada kale ee galmada lagu kala qaado waxaana lagu dalban karaa lacag la’aan barta www.gratiskondomer.no
PrEP (kor-u-qaadista prophylaxis) waa daawooyinka HIV-ka ee la siiyo HIV-taban si looga hortago si la isu qaadsiyo HIV-ka. Si aad u hesho PrEP, waa in dhakhtarkaaga guud uu kuu diraa, xarunta caafimaadka ee Olafia ama waaxda cudurrada faafa ee isbitaalka aad ka tirsan tahay.
Haddii aad la kulantay oo aad ku dhacday xaalad khatar ah oo muhiim ah, PEP (ka-hortagga cudurka) waxaa loo siin karaa daawo ka hortagi karta fayraska HIV-ku inuu galo unugyada oo uu tarmo. PEP waa in sida ugu dhaqsaha badan loo qaataa ilaa iyo 48 saacadood ka dib marka lala kulmo HIV-ka. PEP waxaa la qaataa 28 maalmood. Dhammaan xarumaha caafimaad ee xaaladaha degdegga ah iyo adeegyada gurmadka deg-degga ee magaalooyinka waaweyn ee Noorway waa inay awoodaan inay maamulaan PEP iyadoon la soo marin wadahadal dhakhtar ee qaybta daawaynta cudurka.